Furitaanka Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line ayaa dib loo dhigay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulFuritaanka Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line ayaa dib loo dhigay
14 / 05 / 2020 34 Istanbul, tareenka, SAWIRADA, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
imamoglu mecidiyekoy mahmutbey waxay sameeyeen baaritaano khadka toosan
Madaxweynaha remBB Ekrem İmamoğlu wuxuu baaritaan ku sameeyay Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line's Nurtepe Station. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya inay qorsheynayaan inay khadka wax ka dhigaan adeegga 19ka Maajo, laakiin nidaamka faafa ma oggolaanayo arrintaas, İmamoğlu ayaa yidhi, "Waxaa heshiis lala galey shirkad shisheeye oo ku saabsan nidaamka saxiixitaanka khadka. Nasiib darrose, shaqaalaha shirkadan, ee shaqada halkan ka qabta, badiyaa waxaa maamula xarun Isbaanish ah iyo xarun ku taal Spain. Nasiib darrose, nidaamka Covid, ma aysan awoodi karin inay qabtaan hawshan illaa Maarso 3 ”. Isagoo sheegay in ay jiraan goobo kale oo dhismaha ah oo howshaasi ay soo martay carqalado noocan oo kale ah, İmamoğlu wuxuu yidhi, "Waan ka xunnahay guuldaradan, laakiin ma ahan xallin. Si dhakhso ah ayaan u xallin doonnaa. ”
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Metropolitan Municipal (IMM), ayaa kormeer ku sameeyay Xarunta Nurtepe ee Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line, oo uu dhismuhu socdo. Muwaadiniinta helay macluumaadka ah in Imamoglu imaan doono xarunta ayaa jacayl tusay Madaxweynaha IMM ee balkoonka. Muwaadiniintii ka jawaab celisay sacab iyo vingmamoğlu, ayaa ku soo degay dabaqa. Macluumaadka farsamada ee ku saabsan shaqooyinka khadka ayaa waxaa siiyay İmamoğlu oo ay soo saartay Pelin Alpkökin, Madaxa Waaxda Nidaamka Sahamada ee IMM. Alpkökin, khadkaaga, Beşiktaş iyo Kabataş Wuxuu la wadaagay macluumaadka in shaqooyinka taariikhiga ah ee saldhigyada ay sii wadeen İmamoğlu.
“Xaalada Xaalada Goobaha Goobaha”
Ka dib markii uu qiimeeyay soo bandhigida Alpkökin, İmamoğlu wuxuu yiri: “Waxaa jira shirkad shisheeye oo qandaraas hoosaad ka leh halkan. Nidaamka saxiixa waxaa lagu heshiiyay shirkaddaas. Nasiib darrose, waa meesha ay ku shaqeeyaan shaqaalaha shirkadda ee ka shaqeeya, oo inta badan laga maamulo xarun dhexe oo ku taal Hispanic iyo Isbaanish. Nasiib darrose, iyada oo la raacayo hannaanka 'Covid', waxay awoodi waayeen inay bixiyaan adeeggan ilaa iyo 3-da Maarso Waxay ahayd inay ka baxaan goobtan shaqo oo ay ku noqdaan waddankoodii. Ku dhawaad ​​2,5 bilood, ma heli karno adeeggan. Waxa jira qaar ka mid ah shaqaalaha maxalliga ah ee ka shaqeeya adeeggan halkan, sida laga soo xigtay shirkadda qandaraaslaha. Laakiin dabcan tani waa daraasad aan ku filnayn. Sida aad hadda arki karto, waxay ku dhammaatay gebi ahaanba kiiskii saldhigga. Jawiga noocaas ah, waxa kaliya ee soo socda waa calaamad. Qaybta farsamada waa mid aad muhiim ugu ah arrimaha noocaas ah. Si kale haddii loo dhigo, Suuragal maaha in halkan lagu furo iyada oo aan la helin tijaabooyinkaas iyo qaabsocodyadooda. Waxaan sugeynaa isaga hadda; isgaarsiinta ayaa sii socota. Shirkadda qandaraaslaha ah labadaba annaguna waxaan sii wadnaa isgaarsiinta si aan sida ugu dhakhsaha badan u keeno. Waxaan ku jirnaa dadaal aad u badan. Waa maxay jawaabta aan la qaadan karin ilaa 80 maalmood, waa inaan halkan idiinkugu gudbinaa shuruudaha tilmaamaha sida tijaabooyinka muddo 90 maalmood ah. Waxaan ku jirnaa dadaal aad u weyn sidii aan caadi uga dhigi lahayn oo shaqaalaha halkan uga keeni lahayn Isbaanish. Khadkeennu sidoo kale wuxuu bilaabay inuu qaato wax yar ka hor intaanu saxeexin khadka adeegga ee aan rabno inaan siinno dadka reer Istanbul. Haddii kale waxaan furi doonnaa bisha Maajo, waxaan yeelan lahayn dhacdo murugo leh. Waxaan haysanaa goobo dhisme iyo mashaariic kale oo halkaas oo Covid ay soo martay dhibaatooyin noocaas ah. Waan ka xunahay cunsurkan. Maaha ganacsi aan la xallin karin; si dhakhso ah ayaan u xallin doonnaa. ”
INTENSIVE INTEREST IN THE BALCONES
Ogeysiiska ka dib, İmamoğlu, oo hoos ugu dhaadhacayey goobta sagootinta wafdiga la socday, ayaa waxaa wehelinayay Mevlüt Öztekin, duqa magaalada Kahanethane. Markii uu dhammeystiray imtixaannadii saldhigga, İmamoğlu wuxuu ka tagay Nurtepe isaga oo u duceeyay muwaadiniintii ku ururtay balakooniyadooda ereyada "Waan ku jecelnahay, Madaxweyne, waad ku mahadsan tahay."
Mecidiyeköy - Mahmutbey Line Line, Warehouse - Aagga Dayactirka iyo Khadka Isku Xiriirka Wareerada…
Ogeysiinta Qandaraaska: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro khadka qandaraaska iyo dayactirka bakhaarka, bakhaarka…
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Muuqaalka Dhismaha Wadada Wadada ee Metro Line ayaa dib loo dhigay ilaa 16ka Abril
Ogeysiiska Qandaraaska: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Gaadiidka Tareenka ee Nidaamka Gaadiidka Dadweynaha…
Mecidiyeköy-Mahmutbey Line Line, Goobta Dayactirka ee Warehouse-ka iyo Mashruuca Khadka Xiriirka Wareerada…
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Line Warehouse - Aagga Dayactirka iyo Khadka Isku Xiriirka Wareerada…
Warehouse Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro - Wareegtada Dayactirka iyo Khadka Isku Xiriirka Wareerada…
Qandaraaska Machidiyekoy-Mahmutbey Mashruuca Tareenka ee la qaban doono bisha Sebtembar
Mecidiyekoy-Mahmutbey line-upka ayaa ku dari doona qiimaha mashaariicda
Mecidiyeköy - Maxmutbey line line ayaa lagu qaban doonaa 2017
Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line ayaa joojiya
Qandaraaska Qodobka Mahmutbey-Mecidiyekoy ee la saxiixay
Biyo yaraanta sababtoo ah dhismaha Makidiyekoy-Mahmutbey line line
Shahaadada Selluka waxaa la siin doonaa Ganacsatada u hoggaansan shuruudaha Nadaafadda ee İzmir
Gobolku wuxuu bixiyaa 1,5 Doolar qof walba oo rakaab ah oo yimaada Xerada Ankara YHT
Saacadaha Tareenka ee Adana Mersin ee Hada socda, Qiimaha Tigidhada iyo Khariiddada Jidka
Ma rabnaa inaan ilaalino deegaankeena?
Si loogu dabaaldego Maalinta Deegaanka Adduunka ee 5-ta Juun: 'Turkiga ee Dhiirrigelinta shidaalka shidaalka waa inuu ahaadaa'
EGIAD 78-aad Shirka Aegean wuxuu ahaa Martida Tunç Soyer
Go'aanno cusub ee Gaadiidka Dadweynaha Istanbul ..! Rakaabka aan la aqoonsan doonin lama qaadi doono
Xalka Kale ee taraafikada 'Baaskiilka' Istanbul
Nazım Hikmet Ran waxaa laga xusaa sanadguurada 57aad ee dhimashada! Waa kuma Nazım Hikmet Ran?
Kabataş Goorma ayaa Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line la furi doonaa?
Mecidiyeköy-Mahmutbey ayaa ku dhawaaqay weriyeyaasha xaraashka
Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Mashruuca Mashruuca Khadka Maraya Electromechanical…
14 Biyo la'aanta biyaha ee Istanbul oo qayb ka ah dhismaha mitrooga Mecidiyekoy-Mahmutbey
Mahmutbey Mecidiyeköy Tareenka Qadka Tareenka ee la sameeyey